खाली खुट्टा दौडिने म्याराथन किङ्ग गोपीचन्द्र पार्कीको ओलम्पिकसम्मको यात्रा » Mero Khel
८,माघ,२०७७ ( Thursday, January 21, 2021 ) 7: 33 am
MeroKhelPosted on ८,मंसिर,२०७७ November 23, 2020 २ महिना पहिले
काठमाण्डौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा एथ्लेटिक्सका स्वर्णधारी गोपीचन्द्र पार्की टोकियो ओलम्पिक खेल्नका लागि छनोट भएका छन् । सागमा ५ हजार मिटर दौडमा स्वर्ण जितेका पार्कीले अब अर्को वर्ष जापानमा हुने ओलम्पिकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका छन् । कोरोना भाइरस महामारीको कारण छनोट प्रतियोगिता गर्न सम्भव नदेखिएपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले मान्यता दिएको नेपालगञ्ज म्याराथन जित्दै पार्कीले ओलम्पिकसम्मको यात्रा तय गरे ।
नेपालगञ्ज म्यारथनलाई ओलम्पिक छनोटको माध्यम बनाइएको थियो । त्यसैले निकै मेहनत गरेको पार्की सुनाउँछन् ।
‘ओलम्पिक छनोटका रुपमा हेरिएको प्रतियोगितामा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा थियो’, पार्कीले भने, ‘लकडाउनपछि पनि राम्रो दौडिन सकें । यो निरन्तर अभ्यासको प्रतिफल हो ।’
पार्कीले शनिबार सम्पन्न छैटौं नेपालगञ्ज म्याराथनको विजेता बन्न आर्मीका कृष्ण बस्नेतलाई पछि पारे । पार्कीले निर्धारित दूरी २ घण्टा १८ मिनेट ५९ सेकेन्डमा पूरा गर्न सफल भए । यो नेपालमा भएका म्याराथनमध्धे कुनै पनि खेलाडीले दौड पूरा गर्न लागाएको छोटो समय मध्धे हो ।
ओलम्पिकमा छनोट भएकोमा खुसी लागेको भन्दै पार्कीले कोरोना महामारीको बेला हरेकदिन अभ्यास गरेको सुनाए ।
‘महामारीको बेला पनि अभ्यास गरिरहेँ, म आज पनि अभ्यास गरिरहेको छु । त्यसैले सफल बन्नसकें जस्तो लाग्छ ।’ पार्कीले भने ।
अबको लक्ष ‘रेकर्ड तोड्ने’
सागमा स्वर्णको सपना पुरा गरेका पार्कीले ओलम्पिकमा कीर्तिमान राख्ने सपना भएको बताए । ‘अबको लक्ष कीर्तिमानी धावक बैकुण्ठ मानन्धरको रेकर्ड तोड्नु हो’ उनी सुनाउँछन् ।
‘सागमा स्वर्ण जित्ने सपना पुरा भएसँगै मेरो सपना ओलम्पिक खेल्ने थियो, ओलम्पिक खेल्नको लागी छनौट भएसंगै अब कीर्तिमानका लागि खेल्नेछु’, उनले भने ।
मानन्धरले अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनमा २ घण्टा १५ मिनेटमा दूरी पूरा गर्दै आफ्नो नाममा राष्ट्रिय कीर्तिमान राखेका छन्। ‘सो कीर्तिमान अहिलेसम्म कसैले तोडेको छैन, सन् २०२१ भित्र म उहाँको कीर्तिमान आफ्नो नाममा गर्न चाहान्छु’, पार्कीले भने ।
‘ओलम्पिकमा छनोट हुनु मेरा लागि सुखीसँगै चुनौतीको विषय पनि हो । मरो आगामी तयारी भनेको ओलम्पिकमा पदककै लागि हुनेछ । त्यसपछि बैकुण्ठ मानन्धर गुरुको नाममा रहेको ३५ वर्षे इतिहास तोड्ने हुनेछ । यो त्यत्ति सहज त छैन, तर पनि म कोसिस गर्नेछु ।’ आफ्नो योजना सुनाउँदै पार्कीले भने ।
कीर्तिमानी धावक मानन्धरले सन् १९८७ मा भएको ओलम्पिकमा निर्धारित दुरी २ घण्टा १५ मिनेट ३ सेकेण्डमा पुरा गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान राखेका थिए । मानन्धरले बनाएको उक्त रेकर्ड अहिलेसम्म कसैले तोड्न सकेको छैन ।
खालि खुट्टा दौडिएका पार्कीको सफलताको सुत्र
धावक पार्की निकै संघर्षपछि यो स्थानसम्म पुगेका खेलाडी हुन् । अर्का धावक राजेन्द्र भण्डारीबाट प्रेरित पार्कीका सुरुवाती दिनहरु निकै अभावमा बितेका थिए । विद्यालयस्तर हुँदै जिल्ला, जिल्लाहँुदै अञ्चल र अञ्चल हुँदै राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा वर्चस्व जमाउन थालेका पार्की सुरुवाती दिनहरुमा खालि खुट्टा नै दौडिन्थे ।
‘अभावमा खालि खुट्टा दौडिएको सम्झना छ, त्यसैले केही गर्नुपर्छ जस्तो संधै लागि रहन्छ’, पुरा दिन स्मरणगर्दै पार्की सुनाउँछन् ।
‘म गाउँको सामान्य परिवारमा हुर्केको व्यक्ति, मैले दौडन सुरु गर्दा आवस्यक जुत्ता र ड्रेस जुटाउन सक्ने अवस्था म र मेरो परिवारको थिएन’, पार्कीले सम्झिए, ‘सानैदेखी दौडमा रुचि भएकोले खाली खुट्टा नै दौडिन सुरु गरेको थिएँ ।’
गाउँबाट काठमाण्डौँ आएर पनि केही समय खाली खुट्टनै दौडीएको पार्कीको अनुभव छ ।
पार्की भन्छन्, ‘तीनै कठोर दिन सम्झिएर मैले निरन्तर मेहनत गरिरहेको छु । त्यही मेहनत मेरो सफलताको सुत्र हो जस्तो लाग्छ ।’
सहयोगि बिद्यालय/परिवार र प्रेरणा राजेन्द्र
कैलालीको धनगढीस्थित गौरीपुरमा वि.स. २०४६ साल साउन १० गते जन्मिएका पार्की परिवारका छैटौँ सन्तान हुन् । उनको परिवारमा बुबा–आमा, दुई दिदीसहित पाचँ दाजुभाई छन् । सामान्य परिवारमा जन्मिएका कारण पार्कीलाई धेरै कुरा सहज थिएनन् । परिवारको जीविकोपार्जनको स्रोत कृषि भएको कारण पनि उनले सहजै दौडन पाउँछु भन्ने सोचेका थिएनन्, तर उनलाई आफू अध्यनरत बिद्यालय र दाजु तथा परिवारको सहयोग रहयो ।
धनगढीकै भगवती मा.वि. बाट विद्यालय जीवन सुरु गरेका पार्कीले सोही विद्यालयमा अध्ययनसँगै खेल क्षेत्रमा लाग्ने अवसर पाए । उनी अध्ययनकै क्रममा विभिन्न विद्यालयस्तरीय दौड प्रतियोगितमा सहभागी हुन थाले । सहभागी धेरै प्रतियोगितामा उनी विजयी समेत हुन्थे । त्यसैले पारिवारिक आयस्रोत कम्जोर भएका पार्कीलाई दौड प्रतियोगितामा सहभागी हुन विद्यालयले पनि महत्वपूर्ण सहयोग दिएको थियो । यसबाहेक उनका दाजु गणेश पार्की पनि राष््िटरय स्तरका खेलाडी भएकोले परिवारमा माहौल बनेको थियो ।
पार्कीले राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी बन्ने र देशका लागि स्वर्ण जित्ने कल्पना कक्षा आठ पढ्दाबाट सुरु गरेका हुन् । उनी कक्षा ८ मा अध्ययनरत रहँदा सन् २००६ मा श्रीलंकामा भएको दसौं सागमा नेपालका लागि धावक राजेन्द्र भण्डारीले स्वर्ण जितेका थिए, तर राजेन्द्रले प्रतिबन्धित औषधी प्रयोग गरेको भन्दै केहिदिनमै उनको स्वर्ण खोसिएको थियो । पार्कीले यो खबर रेडियोमार्फत सुनका थिए ।
‘यो खबर सुन्ना साथ देशका लागि स्वर्ण जित्ने कल्पना आयो’, पार्कीले भने, ‘भण्डारीको बारेमा रेडियोमा बजेको समाचार कानमा पर्नासाथ साग गेम खेल्ने, नेपाललाई स्वर्ण पदक दिलाउने सपना बुनियो । भण्डारीनै मेरो प्रेरणाका स्रोत हुन् ।’
(पार्की १३ औं सागमा १४ वर्षपछि खोसिएको ५ हजार मिटर दौडको राजेन्द्र भण्डारीको स्वर्ण फिर्ता ल्याउन सफल भए)
स्कुलदेखि ओलम्पिकसम्मको यात्रा
जापान ओलम्पिकका लागि छनोट भएका पार्की सुरुवाती दिनमा स्कुलस्तरिय प्रतियोगिता खेल्थे । उनी त्यसपछि जिल्ला, अञ्चनल र राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितहरुमासमेत सहभागी हुन थाले । आफु सहभागी धेरै प्रतियोगितामा सफलता हात पारेका उनले वि.स.२०६६ साल फागुन १८ गते विभागीय टिम शशत्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबमा आवद्ध हुने मौका पाए । यो बीचमा उनले २०७२ सालमा भएको प्रधानसेनापति कप, ८ औँ राष्ट्रिय खेलकुद लगायत धेरै राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उपाधि जितेका छन् ।
पार्कीले सन् २०१४ मा कोरियामा भएको एसियाली खेलकुदमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पाइला टेकेका थिए । यस्तै पार्कीले घरेलु भुमीमा भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा स्वर्ण जितेका थिए । पार्कीले सागमा ५ हजार मिटर दौडमा स्वर्ण जित्दै कीर्तिमान राखेका थिए । १३ औं सागमा उनले १४ वर्षपछि सागमा खोसिएको ५ हजार मिटर दौडको स्वर्ण फिर्ता ल्याउन सफल भए । राजेन्द्रपछि सागमा ५ हजार मिटर दौडमा स्वर्ण जित्ने पार्की दोस्रो धावक हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः पब्जी मोबाइल ग्लोबल च्याम्पियनसिपमा सहभागि हुन नेपाली टोली दुबई प्रस्थान
Tags१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद एथ्लेटिक्स ओलम्पिक दौडिने म्याराथन नेपालगञ्ज नेपालगञ्ज म्यारथन म्यारथन साग
Previous Post२ सातापछिअस्ट्रेलियन ओपनको मिती तथा तालिका तय हुनेPrevious Post
Next Postसलाह कोरोना मुक्तNext Post
MeroKhelPosted on ७,माघ,२०७७ January 20, 2021 ११ घण्टा पहिले
Home>फिचर समाचार>खाली खुट्टा दौडिने म्याराथन किङ्ग गोपीचन्द्र पार्कीको ओलम्पिकसम्मको यात्रा